“Khaarajinta Ikraan waxaa maleegey 2 nin waxaana fuliyey….” – Siyaasi kashifaad cusub sameeyey + Magacyada | Hadalsame Media
Home Wararka “Khaarajinta Ikraan waxaa maleegey 2 nin waxaana fuliyey….” – Siyaasi kashifaad cusub...
“Khaarajinta Ikraan waxaa maleegey 2 nin waxaana fuliyey….” – Siyaasi kashifaad cusub sameeyey + Magacyada
(Muqdisho) 22 Luulyo 2021 – Xildhibaan Mahad Salaad ayaa xog cusub ku biiriyey kiiska la bixin la’yahay ee Ikraan Tahliil oo uu 3 nin wax ka saarayo, kuwaasoo uu sheegay inay 2 ka tirsan faro ka haysey.
Wuxuu qoraal uu sheegay inuu xog badan arrintan ka helay ku sheegay warkan:
QORSHAHA – Qorshaha khaarijinta Ikraan Tahliil waxa soo maleegay Fahad Yaasiin iyo Kulane Jiis, fulintiisana waxaa u xilsaarnaa Yaasiin Farey!
XOG CUSUB – Xog rasmi ah oo aan ka helay saraakiil sarsare oo ka tirsan Hay’adda Nabad Sugidda in muddo ahna aan dabo socday xaqiijinteeda waxay sheegaysaa in mar hore la dejiyay qorshaha lagu khaarijinayo Ikraan Tahliil. Ikraan oo dalka ka maqneed markii shirqoolka loo maleegay ayaa lagu qarash gareeyay boqolaal kun oo dollar iyo balanqaadyo been ah si dalka dib loogu soo celiyo loona khaarijiyo!
XADIDAAD – Ikraan markii dalka ay ku soo laabatay isla markiiba waxaa la xaddiday dhaqdhaqaaqeeda, waxaana loo xilsaaray dabaggalka iyo la socodka Ikraan Taliyaha Nabad Sugidda Gobolka Banaadir Yaasiin Farey. Wuxuuna ahaa qofkii ugu dambeeyay ee Ikraan ay wada hadleen kahor inta uusan go’in xiriirkeeda!
ISKU DAY SAAN-TIRID – Qorshaha khaarijinta Ikraan oo markii hore la rabay in la qariyo ayaa markii qoyskeeda qaylodhaantu ka soo yeertay Fahad Yaasiin isku dayay in uu Alshabaab lacag ku siiyo si ay u sheegtaan dilka Ikraan Tahliil lkn waa guul dareystay isku daygaas kadib markii ay soo farageliyeen sida la sheegay saraakiil sarsare oo Alshabaab ka tirsan qaraabo dhawna ay yihiin Ikraan.
SABABTA – Sababta Ikraan in la dilo loo go’aamiyay ayaa la ii sheegay labo arimood oo aad xasaasi u ah oo ay macluumaad ka heysay, kuwaas ku saabsanaa sidii loo qorsheeyay dilkii Allaha u naxariistee Eng Yariisow oo xaafiiskiisa ay madax ka ahayd iyo arimo waaweyn oo Fahad Yaasiin iyo Kulane Jiis ku lug leeyihiin!
SOO JEEDIN – Ehelada Ikraan waxaan kula talinayaa in ay qabsadaan Qareeno dabogal iyo baaritaan ku soo sameeya shirqoolka Ikraan si looga gungaaro fal dambiyeedka dhacay, loona cadeeyo cida ka mas’uulka ah!
Previous article”Waan baaraynaa!” – Kenya oo xog dheeri ah kasoo saartay dayuuraddii ku dhacday Ceelwaaq (Halka ay u socotey & magaceeda)
Next article“Cid dhulkeenna kusoo xadgudbi kartaa ma jirto!” – Kenyatta oo Somalia ku dhega hadlay